Nidina taty amin’ny faritra Alaotra Mangoro ny delegasiona notarihin’ny Praiministra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany, nijery ireo distrika tena voamafy sy ny vahoaka tra-boina, vokatry ny rotsak’orana niteraka tondra-drano nitranga tamin’ny herinandro lasa teo.
Nivoitra tamin’ity dia ity fa hatomboka rahampitso ny asa fanarenana ny RN44, ary ny alakamisy kosa ny RN3A, mba hamerenana ny famatsiana ny solika izay iankinan’ny sehatry ny famokarana.
Nifandimby tonga teny amin’ny BNGRC Antanimora, nitondra ny anjara birikiny ho an’ireo Malagasy niaram-boina noho ny ranobe, ny fianakavina Andriatsima Faneva IMA, kapitenin’ny Barea teo aloha, nanome vary 30 gony. Ny rainy sy ny anabaviny no nisolotena azy nanatitra ny fanomezana. Tonga teny ihany koa i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea nanatitra vary 20 gony.
Teo koa Rakotoarivony Arsène nanolotra vola 100 000 Ariary sy Randrianandrasana Andrianitafika izay monina any ivelany nanome akanjo fitafy roa fatorana.
lundi, 27 janvier 2020 22:48
Sambava: Nirongatra ny vaky fasana
Tranon-drazana miisa any amin'ny 20 any no nisy nanakorontana tamin’ny herinandro teo tao Anjia ; nahitana fasana roa hafa indray androany 27 janoary 2020 tao Ambavala Sambava Centre.
Nidina tamin'ireo toerana ireo ny Polisy nijery ny zava-nisy mba hahafahana manokatra fanadihadina hafantarana iza no ao ambadik’izao vaky fasana izao.
Maneho ny alahelony ireo tompon-kavana manoloana izao fanimbazimbana ny razana izao.
Hatreto dia tsy misy taolana lasa raha ny tao Ambavala manokana fa ny tranon-drazana no savoritaky ny olon-dratsy.
lundi, 27 janvier 2020 22:23
Tafika Malagasy: Manezaka manavotra ireo traboina sy manarina ireo foto-drafitrasa simban'ny rano be
Maro ny olona mbola tavela amin'ny toerana tondra-drano. Mitohy hatrany ny fanavotana ataon'ny Miaramila azy ireo, hamonjy toerana azo antoka toy ny tao Mitsinjo.
Toy izany koa ny famonjena aina ireo ankizy sy ireo marary izay notaterina haingana namonjy toeram-pitsaboana, toy ny tao Ampanjabe, Anjaraborona, Maromiandra, Marovoalavo, Mankandala, Andonosy sy Amarofisoka.
Nihazo an'i Madirovalo ihany koa ny angidimby an’ny Tafika mitondra ireo dokotera sy ireo fanafody ilaina amin'izany.
Mirotsaka an-tsehatra amin'ny asa fanarenana vonjimaika ny foto-drafitr'asa sy famahana ny lalana ahafahana mifamoivoy sy hamerenana haingana ny fiainana andavan'andron'ny mponina ihany koa ny Tafika Malagasy.
Ho fiaraha-mientana ho an'ireo traboina tany amin'ny faritra dia nanatontosa fotoam-bavaka ny mpanao gazety, izay natao teny amin'ny Katedraly Analakely io maraina io.
lundi, 27 janvier 2020 20:44
Rakotoson Jobily: Nodimandry teo amin'ny faha 95 taonany
Nodimandry androany alatsinainy 27 janoary 2020, tamin'ny 5ora maraina, teny amin'ny hopitaly HJRA i Rakotoson Jobily.
Efa miandry any ny fanampiana aman-taonina maro izay atolotry ny ONG WFDP hanampiana ireo traboina any amin'ny faritra, araka ny fanambaran'andriamatoa Ny Rado RAFALIMANANA tamin'ny mpanao gazety.
Efa vonona ny fiaramanidina hitondra an'io fanampiana io ho eto Madagasikara izay hiandrasana ny fanapaha-kevitry ny avy eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblikan'i Madagasikara.
Asa fanampiana no atao hoy ity farany ka tsy ilaina ny resabe, ka dia manolotra izany hantsitrapo ny tenany sy ny avy amin'ny fikambanana misy azy.
lundi, 27 janvier 2020 19:56
Anjiajia: Hita avokoa ny basin’ireo Zandary lasan’ny rano teo ampanavotana ireo traboina
Tra-doza ny lakam-by nitondra ireo Zandary nanavotana ireo traboina noho ny ranobe nandritra ny andro ratsy ny herinandro lasa iny, tao Anjajia Distrikan’Ambato-Boeny. Avotra avokoa ny olona tao anaty lakana, saingy latsaka tany anaty ranobe ny basin’ny Zandary telo lahy tamin’ireo tao anaty lakam-by.
Nifarimbona nanao fikarohana ny Zandary sy ny Fokonolona rehefa nanomboka nidina ny rano, ka hita avokoa ireo fitaovam-piadiana very sy ny tranom-bala niaraka taminy.